Hagaha Bilowga Hagidda Shahaadada Diiwaanada ee Oracle | ITS
Hagaha bilowga ah ee Hagaha Aasaasiga ee Oracle
Shahaadada Oracle Database Waa Hagaha Hagaha Bilowga
Shahaadooyinka Diiwaanada ee Oracle
Horumarinta Codsiga 1.Database
2. My SQL:
Mid ka mid ah shirkadaha ugu horreeya ee IT-da ee meeraha, Oracle waxay ka badan tahay shahaadooyinka 300 si ay u bixiyaan. Koorasyadani waxay ka kala soocaan 9 kala duwan oo ay ku daboolaan jaangoynta aqoonta oo ay ku jiraan database-yada, qaab-dhismeedka, codsiyada, sanandheynta, maamulka iyo kuwa kale. Koorsooyinka Diiwaangelinta ee Oracle Database Xooga saar badeecada, marxaladaha, qalabka iyo casriga ah ee Oracle bixiya macaamiishiisa oo dhan, waxayna ku talajiraan inay sameeyaan shaqaale tayo leh oo ka faa'iideysan kara waxtarka Oracle ee awoodda iyo toosinta.
Koorasyada Oracle iyo shahaadada xogta waxay daboolayaan aqoonsiyada kala duwan. Qeybaha guud ee 3 oo hoos imanaya shahaadooyinka xogta ee Oracle waa:
Shahaadooyinkan waxay bixiyaan aqoonta takhasuska ee Takhasuska ee u diritaanka codsiga dalabka Oracle. Shahaadooyinka la xiriira ee domainka waxaa ka mid ah:
● SQL iyo PL / SQL: waxay ku taalaa barashada luqadda barnaamijka SQL.
● Oracle Application Express ama Oracle APEX: waxay bixisaa waxqabad ku saabsan hagaajinta iskudhafka iyo hagaajinta aragtida barnaamijyada, qalabka la qabsoomo oo si fudud loo maareeyo.
Qiimaynta shahaadada ee Oracle waxay bixisaa koorsooyin kaa caawinaya inaad ka qaadato waxyaabo badan oo ku saabsan mawduucyada boggling ee lagu tilmaamayo lahjadda 'SQL' iyo kordhinta tixgelinta resume. Shahaadooyinka 2 ee halkan waa:
● Maamulkayga xogta SQL-ga: wuxuu siiyaa macnaha astaamaha lagu qeexay xajinta database-ka iyo codsiyada kala duwan ee lagu ogaaday.
● Qalabeyaalkayga Sameeyaha: Qabyaalada halkan ku dhammaystiran waxay ku saabsan yihiin horumarinta habraaca qorista iyo istaraatiijiyada qoraalka ah ee hadafka ah ee aad ka dhigi karto warbixinno sahlan oo aan dhamaystirnayn macaamiisha dhammaadka.
Diiwaanada Oracle waa mid caan ku ah adduunka. Shahaadooyinkan waxay kuu ogolaanayaan inaad noqoto takhasus ku saabsan kormeerida macluumaadka macluumaadka. 4 shahaadooyin gaar ah ayaa lagu dhajiyay aagga xirfaddan. Kuwaas waxaa ka mid ah:
● Daahfurka Oracle 12c: Shahaadadan waxay bixisaa DBAs (Maamulayaasha Database-yada) waxyaalla muhiim u ah oo looga baahan yahay inay kormeeraan macluumaadka kaydka Oracle ee guriga maalin kasta. Waxaa intaa sii dheer dhiirrigelinta qaabeynta, kor u qaadida iyo fulinta foomamka dib u soo kabashada iyo xoojinta. Khabiirada ayaa isku dari kara hawlgallada iyaga oo isticmaalaya macluumaadka kaydka miisaaniyadaha isku dhafan.
● Oracle Database 11g: shahaaddadu waxay siinaysaa awood ku wajahan daaweynta ku habboon ee hubinta, kalsoonida, la maamuli karo iyo kharashka waxtarka leh ee Oracle database 11g, kaas oo loo isticmaali karo dhinacyo kala duwan.
● Daruura xogta: Tani waa shahaadooyin la riixay oo lagu aqoonsaday maamulka xogta Oracle.
● Oracle Spatial 11g: shahaaddadu waxay bixisaa tilmaam iyo isbeddello xagga imtixaanka, hordhaca iyo maamulka xogta meelaynta. Hase yeeshee, 80% macluumaadka ay heshay urur ganacsi ayaa lagu wargelin karaa macluumaadka xaddidan.
Shahaadooyinka Oracle waxaa la siiyaa heerar kala duwan, Associate oo ah mid muhiim ah. Qiyaasaha kale iyo tan ka weyn waa Master Master, Heerarka Takhasuska iyo Khabiirka. Waa inaad ka bilowdid heerka ugu hooseeya (lammaanaha). Shahaadooyinka sare waxay awood u siinayaan inaad sare u qaaddid kartidaada, waxayna sidoo kale kuu soo gudbineysaa karti dheeraad ah, barasho iyo magdhow.
Waxaad ku biiri kartaa Jaamacadda Oracle Online xagga dhamaystirka koorasyada shahaadeynta ee database-ka, halka ay jiraan machado kale oo farshaxan oo isku xira Oracle isla markaana lagu xaqiijiyey in ay ku siiyaan xogta iyo noocyo kala duwan Shahaadooyinka Oracle sidoo kale. Barayaashu waxay qaadaan koorasyada casharrada waxay xaqiijin doonaan inaad hesho dhammaan waxbarashada iyo kartida aad u baahan tahay inaad dhammaysato hagaha wakhti aan wakhti yareyn iyo wakhti aan dhamaad lahayn. Qalabka koorsada waa mid la heli karo oo waa inaad barataa inay si waxtar leh uga jawaabaan su'aalaha si wax ku ool leh markaad ka hortageyso jawaabta ugu dambeysay ee ugu dambeysay ee ku saabsan nooca imtixaanka sahanka ee Oracle Database.
Iyada oo ku xiran nooca shahaadada xogta ee aad leedahay, waxaad yeelan doontaa aqoonta loo baahan yahay ee ku wajahan maamulka macaamiisha Oracle. The Database waxaa loo isticmaali karaa heerarka hoose, dhexe iyo heerarka sare. Shahaadooyinka iyo shahaadooyinka waxay ansixin doonaan khibradaada iyo macluumaadkaaga oo ay ku habboon yihiin horumarka xirfadda marka aad si kale u yeelato khibrad gacmeed iyo khibrad dhab ah. Shahaadooyinka waxay ka caawineysaa shirkadaha inay si dhaqso ah u dareemaan kala soocistaada oo waxay kaa dhigi doonaan inaad si degdeg ah u sameyso.
Shahaadada Oracle - Hagaha Dhameystiran